Bôtsoana - Wikipedia
Lefatshe la Botswana ((tn))
Republic of Botswana en
Repoblikan'i Botsoana ((mg))
Teny filamatra : Let there be rain (Milatsaha ny orana)
Teny ofisialy tswana, anglisy
24°38′S 25°54′E﻿ / ﻿24.633°S 25.900°E﻿ / -24.633; 25.900
Tanàna lehibe indrindra Gaborone
- hakitroka faha 145
2 098 018 mpo.
Anaran'ny mponina Botsoane
Sandam-bola Pula (BWP)
Hiram-pirenena Fatshe leno la rona
Bôtsoana na Repoblikan' i Bôtsoana dia firenena iray amin' ny faritra atsimo ao Afrika. Mamaritra an' i Bôtsoana ao avaratra sy ao andrefana i Namibia, ao avaratra i Zambia, ao atsinanana i Zimbaboe, ao atsimo-atsinanana sy ao atsimo i Afrika Atsimo. Tamin' i Bôtsoana mbola prôtektôrata britanika dia i Bechuanaland no anarany. Ny anarany ankehitriny dia navadika ho ôfisialy tamin' ny taona 1966. Ny toekareny izay miankina amin' ny toekaren' i Afrika Atsimo, dia anjakan' ny fiompiana omby sy ny fitrandrahana harena an-kibon' ny tany. Ny renivohiny dia i Gaborone ary ny fiteny ôfisialiny dia ny fiteny anglisy sy ny fiteny tsoana. Ny anaran' ilay firenena dia avy amin' ny anaran'ny foko lehibe ao Bôtsoana.
Ny Batsoana, teny izay ampiasaina rehefa miresaka momba ny olom-pirenen' i Bôtsoana, dia avy amin' ny anaran' ny fokon' ny maro an' isa ao amin' ilay firenena ankehitriny (Tsoana no anaran' io foko io any Afrika Atsimo) izay tonga tao Bôtsoana nandritry ny Ady Zolo tamin' ny fiandohan' ny taona 1800.
Talohan' ny nifandraisan' ny Tsoana tamin' ny Eorôpeanina, mpamboly ary mpiompy biby ny Batsoana. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth i Botsoana. Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialiny. Manana velaran-tany mirefy 581 726 km2 i Bôtsoana.
Miisa sivy ny distrika bôtsoaney:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bôtsoana&oldid=1040785"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:03
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:03 ity pejy ity.